I-AC Villa enhle enokubukwa kwe-Mulshi Dam - I-Airbnb
I-AC Villa enhle enokubukwa kwe-Mulshi Dam
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Tejas
Sine-2 BHK AC Villa enhle kakhulu ezungezwe i-lush greenery enokubukeka okuhle kwe-Mulshi Dam. Isimo sezulu siyamangalisa unyaka wonke ngehlobo, ubusika ne-Monsoon kujabulisa ngokulinganayo. Umenzi wokunakekelwa kwesikhathi esigcwele usevisi yakho kusukela ngo-6 ekuseni kuya ku-11 ntambama. Isimo sezulu esiphithizelayo nesiphithizelayo esinezinyoni eziningi, ukubukwa kwamanzi nesigodi, ubusuku obunezinkanyezi benza le villa ibe yinto enhle kakhulu yemindeni.
I-villa inamakamelo okulala angu-2 anomoya oshisayo, izindlu zangasese ezingu-3, ikhishi, ikamelo elikhulu lokuphumula esitezi esiphansi kanye negumbi lomphebezo letafula elinethala elikhulu esitezi sokuqala. Indawo ezungeze i-villa ihlotshiswe kahle ngotshani beqembu elihle, izihlahla ezincane nezinkulu zezithelo zenkathi yonyaka nezimbali, impophoma eyakhiwe enebhuloho elincane elihle lokuwela ngakolunye uhlangothi lwempophoma. Ngaphambi kwe-villa, kunesitshalo esikhulu sezihlahla ezingaba ngu-60 mango (Aamrai), izihlahla ezimbalwa zamantongomane, izihlahla ze-Jamun ne-Lychee ezitholakalayo ukuze izivakashi ziyihlole. Isikhathi esigcwele sikulungele ukukusiza kusukela ngo-7 ekuseni kuya ku-11 ntambama. Uhlala endaweni ehlukile eceleni kwe-villa ngakho uyatholakala ukusingatha noma yisiphi isimo esiphuthumayo 24x7. Sinendlu encane yenja eyimpahla yangasese yezinja zethu ezingu-2 ezinhle. Sinombhede olala abantu ababili owodwa ekamelweni ngalinye futhi singakwazi ukuhlalisa izivakashi ezifika ku-4 ekamelweni ngalinye (ingqikithi yesivakashi esingu-8 ekamelweni lokulala elingu-2) elinomatilasi owengeziwe. Amalungiselelo okulala abantu abengeziwe abangu-6-7 angenziwa egumbini elikhulu lokuphumula elinomatilasi owengeziwe.
Itafula lomdlalo webhola lomphebezo (elinama-racquets angu-4 namabhola) esitezi sokuqala nalo liyindawo ethandwayo nezivakashi zethu. Umabonakude one-TataSky, i-DVD player, i-amplifier enezipikha iyatholakala ukuze isetshenziswe. Ezemidlalo sine-basketball nendingilizi efakwe odongeni olungemuva. Ibhodi le-Carrom, ikhilikithi njll nazo ziyatholakala ukuze zisetshenziswe. Umlilo webhontshisi ungahlelwa otshanini beqembu ukuze ukhokhiswe okwengeziwe. Le nto ethile iyintandokazi ngaso sonke isikhathi ezivakashini zethu njengoba ibanda ebusuku. Isidlo sasekuseni (Poha/Upma), Itiye Lasekuseni/Ikhofi kanye Netiye Lasebusuku/Ikhofi ziyatholakala. Isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa singahlelwa ngemali eyengeziwe.
* * Siphinde sibe namaphakethe osuku ngezinsuku zaphakathi neviki. Ungangena ngo-11: 00 futhi uphume ngo-7pm ngosuku olufanayo. Umyalezo we-PLs ukuze uthole imininingwane eyengeziwe * *
Imibono yethu ilungiselela izivakashi ukudla okumangalisayo (ngenkokhiso eyengeziwe) futhi sinemenyu esiyibekile esingakhetha kuyo. Ukudla kungahlelwa ku-verandah (indawo yokwamukela izivakashi) noma utshani beqembu elingemuva noma ngaphakathi kwe-villa ngendlela othanda ngayo. Khetha futhi uqedele imenyu yakho kusengaphambili (okungenani izinsuku ezingu-2 ngaphambi kosuku lokungena) ukuze sikwazi ukuthenga izithako/ukudla okusha ngesikhathi, silungiselele futhi sikusize kahle. I-Veg (Rs. 300 umuntu ngamunye), i-Non-Veg (Rs 400 umuntu ngamunye), i-Mutton (Rs. 600 umuntu ngamunye). Sicela uthumele umlayezo ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Ikhishi linakho konke okudingekayo kodwa alivunyelwe ukusetshenziswa izivakashi. Ungacela abaphathi ukuthi baphinde bashise ukudla okungenzeka ukuthi ukulethile kusuka ngaphandle noma uma udinga izingilazi, amapuleti, izinkezo njll nganoma yisiphi isikhathi. Uma uletha ukudla kwakho ngaphandle, kunenani lokuhlanza elingu-Rs. 300. Siyazithanda izilwane ezifuywayo futhi zamukelekile emagcekeni kodwa azivunyelwe ngokuqinile ngaphakathi kwe-villa. Leli yikhaya leholide endaweni yasemaphandleni nasendle ngakho lindela izinkinga ezithile zikagesi (nakuba zingavamile), izinkinga zenethiwekhi yeselula (i-Vodafone, Umbono, i-BSNl isebenza), izinambuzane njll. Hlonipha imvelo futhi sicela ungafaki izimbali/izithelo noma wonakalise indlu kanye nendawo ezungezile. Jabulela le ndawo enhle futhi uzizwe usekhaya.
I-villa yethu isemzaneni, emgwaqweni oya e-Mulshi Dam. Iqhele cishe ngamakhilomitha angu-40 ukusuka e-Chandni Chowk nemizuzu engu-45 uma uhamba ngemoto. Imigwaqo isesimweni esihle. Ungahlola idamu le-Mulshi, i-Tamhini ghat, Izimpophoma ezimangalisayo (ngesikhathi se-mansoon). Kunezindawo zokudlela eziningi eziseduze. Izitolo zezokwelapha, izitolo zokudla zonke ziseduze ne-villa.